पोखरामै छ २ लाख पर्ने लोकल भाले, कुखुरा बोलाएर दिनहुँ मिटिङ गर्छ भालेले (स्थलगत रिपोर्ट) – Complete Nepali News Portal
पोखरामै छ २ लाख पर्ने लोकल भाले, कुखुरा बोलाएर दिनहुँ मिटिङ गर्छ भालेले (स्थलगत रिपोर्ट)
Tika Prasad Amgain May 11, 2018
एउटा कुखराको भालेको मुल्य कति पर्ला ? बढीमा १० हजार ? तर पोखराका एक किसानको फर्ममा भएको भालेको मुल्य २ लाख पाउँदा पनी उनले बिक्री गरेनन् । १५ बर्ष बुढो भाले बार्षिक २० लाख भन्दा बढी आम्दानी गराईदिन्छ कृषकलाई । भालेको मुल्य सुनेर त तपाई छक्क पर्नु भयो होला अर्को कुरा सुनेर झन छक्क पर्नुहुनेछ । २ लाख पाउँदा नबेच्ने भालेले सबै कुखुरा बोलाएर भाषण दिन सम्म सक्छ । पोल्टीफर्मका संचालक राजेन्द्र अधिकारी भन्दै थिए, यो भालेले मानिसको इसारा बुझ्छ र अरु कुखुरा बोलाएर मानिसको कुरा सम्प्रेषण गर्छ ।
२ लाखको भाले हेर्नको लागी र पशुपंक्षिबारे अनुसन्धान गर्नको लागी उनको फार्ममा मन्त्रीदेखी सर्वसाधरणको घुईचो समेत हुन्छ । पोखराको लेखनाथ स्थित डाँडाको नाकमा रहेको उनको फार्म पछिल्लो समय लोकल कुखुरा, क्रस, लुइँचे, बनराजा, हाँस लगायत पशुपंक्षिका लागी परिचित बन्दैछ । हेरौं यो २ लाख पर्ने भालेको बारेमा कृषक राजेन्द्र अधिकारीकै फर्ममा पुगेर लिएको अन्तरवार्ता ।
यस्तो रहेछ दिपक न्यौपाने र टिकाराम
पोखरामा बन्यो प्लाष्टिकको सडक, खेर गएका
चलचित्र झमकबहादुरको अडियो गित सार्वजनिक
अशोक दर्जीलाई प्रयोग गरि पैसा कमाउन
चलचित्र ‘मेरी मामु’ इण्डक्ल्याप, प्रचार तताउने
अन्तर्वार्तामा अशोक दर्जीको बारेमा किन यस्तो
बिकृति ल्याउने ज्योति मगर सम्पर्क बिहिन
अदभुत क्षमताकी बालिका जो नहेरीकनै अक्षर
सहयोग समेत गरेका दुर्गेशले भने अशोक
गुल्मीमा ठेकेदारको ज्यादती : उच्च जोखिममा
शौचालय भत्कदा गम्भीर घाइते भएका कृतार्थ
पोखरामा बन्यो प्लाष्टिकको सडक, खेर गएका प्लाष्टिकबाट यस्तो सडक बन्छ...
सहयोग समेत गरेका दुर्गेशले भने अशोक दर्जीको युरोप यात्रा भन्दा...
गुल्मीमा ठेकेदारको ज्यादती : उच्च जोखिममा बस्ती, जीवन मरणको दोसाँधमा...
शौचालय भत्कदा गम्भीर घाइते भएका कृतार्थ अधिकारी जीवन मरणको दोसाँधमा...
मिस्टर आर जे र भट्टराईको मै पनि माया लाउकिको भिडियो...
अशोक दर्जीको नाममा टंक बुढाथोकीले पैसा खायो भन्नेहरुलाई रमेश प्रसाईको...